यो साता सेयर बजारमा १ अर्व ३९ करोड बढीको कारोबार - Arthakoartha.com
काठमाडौं,२३ चैत । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पहिलो दिनको तुलनामा अन्तिम दिन २१. ६१ अंकले बृद्धि भएको छ । साताको पहिलो दिन (आइतबार) ११४३.५९ अंकमा रहेको नेप्से अन्तिम दिन (बिहिबार) ११६५.२० को विन्दुमा उक्लिएको छ।
सातामा कुल जम्मा ७९ लाख ४० कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा १ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । साताको ५ कारोबारमा एनआइसी एसिया बैंकले ३ दिन कारोबारमा अग्रता लिएको थियो ।
साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से ०.९१ अंकले घटेर ११४३.५९ विन्दुमा कारोबार बन्द भएको थियो । सो दिन बजारमा कुल १ सय ६५ कम्पनीको ९,५०,६४३ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो । पहिलो दिन झिनो अंकले घटेको नेप्से दोस्रो दिनमा भने सामान्य सुधार आएको थियो । सोमबार नेप्से ६.४३ अंकले बढेर १,१४९.९९ को बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भयो । उक्त दिन १ सय ७१ कम्पनीको १२,६५,६६२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ३५ करोड २८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी तेस्रो दिन मंगलबार बजार दोहोरो अंकले बढ्यो । सो दिन नेप्से १३.७२ अंकले बढेर ११६३.४७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । बजारमा कुल १ सय ६९ कम्पनीको १८,९३,१२० कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । यस्तै बुधबार पनि सेयर बजारमा सामान्य सुधार देखियो । उक्त दिन भने नेप्से २.०१ अंकले बढेर ११६५.४ को विन्दुमा कारोबार बन्द भएको थियो । बजारमा सो दिन कुल १ सय ७० कम्पनीको २,०४,४४१ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा ५४ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भयो ।
साताको अन्तिम दिन विहिबार भने नेप्से परिसुचक ०. ६४ अंकले घटेर ११६५ .२० विन्दुमा बन्द भएको थियो । सो दिन कुल १ सय ७२ कम्पनीको १७,६९,७ सय कित्ता सेयर खरिद बिक्री भई ४२ करोड ३४ लाख ९२ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
जोशी जलविद्युत कम्पनीले स्थानियहरुलाई प्राथमिक शेयरको बिक्री खुल्ला गर्याे
धनगढी स्थित मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक निमार्ण कार्य सुस्त